Ukaputeni weSharks ujabulela ukunikwa ithuba kwabadlali - Impempe
Ukaputeni weSharks ujabulela ukunikwa ithuba kwabadlali
Ukaputeni weCell C Sharks uLukhanyo Am
Imiphumela ayisho lutho okwamanje kwiCell C Sharks njengoba isadlala eyokungcweka ilungiselela ukuqala kahle kwesizini, ngokusho kukakaputeni waleli qembu laseThekwini, uLukhanyo Am.
Lo kaputeni odlala nakuMaBhokobhoko ukusho lokhu iqembu lakhe lizilungiselela ukuvakashela iLions e-Emirates Airlines Park, ngoMgqibelo ngo-4.15 ntambama.
Umqeqeshi weSharks, uSean Everitt, usixube kakhulu isikimu asibophele kulo mdlalo neLions.
Kubuye abadlali abadala abebengekho ngezinkinga ezahlukene kodwa nalaba ababevele bekhona bafakiwe kulesi sikimu.
Kuyaqapheleka futhi ukuthi lo mqeqeshi ufake nabadlali abangaziwa kulesi sikimu okuyinto u-Am ayithokozela kakhulu.
“Le midlalo yokungcweka imqoka kakhulu kubaqeqeshi ngoba kulapho bebona khona abadlali abahlangana kangcono.
“Imiphumela akuyona into ebhekwe kakhulu kule midlalo kepha okumqoka ukuqinisekisa ukuthi bonke abadlali bahlale bekulungele ukubizwa, ngabe uyadlala kumbe ubuya ekulimaleni.
“Uma ubheka umbhoxo okumele siwudlale uma sekuqala isizini kumele kukucacele ukuthi bonke abadlali abasemabhukwini eSharks bazodingeka ngokwahlukana kwezikhathi. Kusemqoka ukuthi sonke sihlale silungile,” kuqhuba u-Am.
Ukuqonda kahle u-Am ukuthi yize kuwumdlalo wobungani kodwa iLions ayikaze ikuthande ukushaywa yiSharks kusukela kudala.
“Sazi kahle ukuthi yini esiya kuyona. Bonke ubungozi beLions sibazi njengoba sizazi, ngakho siya emdlalweni esikuqonda kahle ukuthi kudingekani kuwona uma sifuna umphumela oncomekayo.
“Okumnandi kakhulu ngokudlala neLions ukuthi ifana nathi, ibhola liyahamba (umbhoxo odle ngejubane). Lokho kukodwa kwenza sikujabulele ukuya kulo mdlalo ngoba asingabazi ukuthi siyodlala into ecokeme,” kusho u-Am.
Selilonke iqembu leSharks eliya eGoli limi kanje:
Mzamo Majola, Dan Jooste, John-Hubert Meyer, Le Roux Roets, Reniel Hugo, Henco Venter, Mpho Gumede, Sikhumbuzo Notshe, Sanele Nohamba, Boeta Chamberlain, Yaw Penxe,Rynhard Jonker, Am (ukaputeni), Werner Kok no-Aphelele Fassi.
Dylan Richardson, Ntuthuko Mchunu, Thomas du Toit, Emile van Heerden, Thembelani Bholi, Grant Williams, Curwin Bosch noMarius Louw.
Previous Previous post: Ngeke isawudedela umgqigqo iMaritzburg
Next Next post: Sekuyazwela ukuthothana kwemidlalo kwiCallies